नसर्ने – Health Post Nepal
पाँचखाल नगरपालिका–७ जोरपीपल मिर्गैला बेच्नेको दैनिक जमघटस्थल हो। छ देखि १० सम्म समूहमा रहने उनीहरु प्रायः मदिरा सेवन गरी अस्वाभाविक अवस्थामा रहने गरेको देखिन्छ। कुनै बेला ‘बैंक अफ किड्नी’का रूपमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बदनाम कमाएको यस क्षेत्रमा मिर्गौला बिक्रीबारे समाचार सङ्कलन...
अमिलो डकार आउँदा ‘ग्यास्ट्रिक’ मात्रै होइन ‘जिइआरडी’ रोग पनि भएको हुनसक्छ
बालबालिकामा अनलाइन हिंसा बढ्दो, आफै गर्छन रिपोर्ट
कोरोना–कालमा शोक : एक मनोसामाजिक विवेचना
कोरोना संक्रमणको पहिलो लहर सकिने आशा गर्दैगर्दा सुरु भएको दोस्रो लहरले अधिकांश मानिसमा डर पैदा गराएको छ। पहिलो लहरमा कम जोखिम देखिएका बालबालिका, युवादेखि बृद्धबृद्धामा पनि कोरोना संक्रमित हुनेदेखि, उपचार नपाउँने, ज्यानै जानेसम्मको डरले सताएको छ । डरका कारणले...
कोरोना निको भएका एक तिहाइमा मानसिक समस्या
कोरोना संक्रमणबाट निको भएका मानिसहरुमा मानसिक समस्या देखिएको एक अध्ययनले देखाएको छ। ‘द ल्यानसेट साइक्याट्री’ नामक एक जर्नलमा छापिएको अध्ययनको रिपोर्टअनुसार संक्रमणबाट निको भएका हरेक तीन व्यक्तिमध्ये एक जनामा मस्तिष्क वा मानसिक समस्या देखिएको छ। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरुले अमेरिकाका...
भक्तपुरमा निःशुल्क पाठेघर तथा स्तन क्यान्सर परीक्षण
भक्तपुरमा निःशुल्क पाठेघर तथा स्तन क्यान्सर परिक्षण भएको छ। भक्तपुर नगरपाालिकाको आयोजनामा वडा २ मा जेसिज इङ्गलिस स्कुलको प्रागंणमा विहानदेखि परिक्षण सुरु भएको हो। फैलिँदो स्तन क्यान्सर र पाठेघर क्यान्सरबाट धेरै महिलाहरु यसबाट पीडित बनिरहेको अवस्थामा नगरबासी महिलाहरुलाई...
सजिलो हेरेर होइन, राम्रोका लागि अस्पताल जाऔं : डा. राणा
मार्क इन्टरनेशनल किड्नी सेन्टरले बृहत निःशुल्क मिर्गौला परीक्षण शिविर, रक्तदान कार्यक्रम तथा वाकाथन कार्यक्रम आयोजना गरी विश्व मिर्गौला दिवस मनाएको छ। सेन्टरका अध्यक्ष डा‌‌. अर्चन शमशेर राणाले यी कार्यक्रमहरु मिर्गौला दिवसमै मात्र सीमित नभई अन्य दिनहरुमा पनि भइरहेको बताएका...
आफू एक वर्ष बुढो हुँदा मिर्गौला कति बुढो भयो होला? अवश्य जाँच गराउनुहोस्!
हाम्रो शरीरमा दुईवटा मिर्गौला हुन्छन्, जसको प्रमुख काम शरीरबाट फोहोर फाल्नु हो । हामीले जुनसुकै खानेकुरा खाएपश्चात् शरीरले त्यसलाई ३–४ भागमा छुट्याउँछ । खाएको चिजलाई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट, भिटामिन, मिनरल्स आदिमा छुट्याएर शरीरले लिने गर्छ । काम नलाग्ने चिज...
डायलाइसिसमा रहेकाहरूको पहरेज!
मिर्गौला हाम्रो शरीरको अभिन्न अंग मध्ये एक हो। स्वस्थ जीवनका लागि स्वस्थ मिर्गौला निकै आवश्यक छ। मिर्गौला स्वस्थ राख्न हामीले स्वस्थ र सन्तुलित जीवनशैली अपनाउनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो मिर्गौला दुई प्रकारले ‘ड्यामेज’ हुनेगर्छ। एउटा दीर्घ रोगले मिर्गौला फेस हुने हो।...
मानसिक तनावले मुटुलाई कसरी असर पुर्‍याउँछ?
तनाव बिनाको मानिस नै हुँदैन। मानिसमा कुनै न कुनै तनाव हुन्छ नै। अलि-अलि मानसिक तनाव हुनु स्वभाविकै पनि हो। व्यक्तिमा कार्यसम्पादनको अलि-अलि तनाव भयो भने मानिस जोसजाँगरका साथ नतिजा ल्याउन उद्दत हुन्छ। तर, यहि तनाव आवश्यकताभन्दा बढी भयो भने...
कलिलो उमेरमा यौनसम्पर्कले पाठेघरको मुखको क्यान्सर
पाठेघरको मुखको भाग धेरै नै नरम हुन्छ । त्यो नरम भागमा मुख्यतः प्यापिलोमा भाइरसका कारण क्यान्सर हुन्छ । पाठेघरको क्यान्सर हुने विभिन्न कारणमध्ये कलिलो उमेरमा यौनसम्पर्क प्रमुख हो । कलिलो उमेरमा यौनसम्पर्कमा सक्रिय हुने केटीहरूमा क्यान्सरको जोखिम धेरै हुन्छ...
– ब्लड (रक्त) क्यान्सरका सुरुवाती लक्षण निकै सामान्य हुनसक्छन् – छालामा डाबर वा फोका तथा रङमा बदलाव ब्लड क्यान्सरका लक्षण हुनसक्छन् – उपचारमा ढिलाइ हुँदा ब्लड क्यान्सर खतरनाक हुन्छ ब्लड क्यान्सर एक खतरनाक रोग हो। हामी धेरैलाई थाहै छ,...
बाथरुममै किन आउँछ बढी हार्ट अट्याक, कसरी जोगिने?
हार्ट अट्याक मानिसका लागि गम्भीर समस्या बन्दै गइरहेको छ। हार्ट अट्याक अचानक हुन्छ। तर, यसका धेरै कारण छन्। अस्तव्यस्त लाइफ स्टाइल र बेकार खानपानका कारण पनि हार्ट अट्याकको जोखिम हुन्छ। हार्ट अट्याकका लागि कुनै निर्धारित समय हुँदैन। तर, धेरै...
नौ महिनादेखि रोकियो मिर्गौला प्रत्यारोपण, बिरामीलाई जोखिममाथि सास्ती
कोरोना भाइरस रोग (कोभिड–१९) महामारीका कारण सिर्जित प्रतिकूल अवस्थामा नेपालमा गति लिएको मिर्गौला प्रत्यारोपण नौ महिनादेखि ठप्प छ। प्रत्यारोपण रोकिँदा सयौं बिरामी डायलासिसका भरमा जीवन धान्न बाध्य छन् भने डायलासिसमा रहेका थुपै्र संक्रमितले ज्यानै गुमाइसकेका छन्। नेपालमा ३० हजारभन्दा...
डिप्रेसनका बिरामी धेरै औषधी पसल चहार्छन् किन ?
साउदी अरब काम गर्न गएका २५ वर्षीय खड्कबहादुरलाई राति निद्रा पर्दैन, मनमा अनेकौं कुरा खेल्न थाल्छन्। पेट पोल्न थाल्छ, खानामा पटक्कै रुची छैन। उनी त्यहाँ गएको दुई महिना भयो। शरीर झमझम गर्न थाल्यो। आफूलाई हासखेल गर्न पटक्कै मन छैन,...
मिर्गौला रोगीका लागि कोरोनाको बढी जोखिम किन ?
बदलिँदो जीवनशैली, उच्चरक्तचाप, मधुमेहजस्ता प्रमुख र अन्य विभिन्न सहायक कारणबाट मानिसको मिर्गौला बिग्रन्छ । मधुमेह भएका बिरामी, रक्तचाप घटबढ हुने बिरामीहरुको मिर्गौलाले विस्तारै काम गर्न छाड्छ । पिसाबमा हुने संक्रमणले पनि मिर्गौला फेस हुनसक्छ । सामान्यत धेरै नुनको सेवन,...
कसरी खराब हुन्छ बालबालिकाका मिर्गौला?
परिवर्तित जीवनशैली, उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायतका कारणले पछिल्ला दिनमा बयष्क उमेर समुहमा मिर्गौला रोगको जोखिम बढ्दो छ । त्यसको मतलव मिर्गौलाका समस्या बयष्कहरुमा मात्रै सीमित छन् । कलिलै उमेर बालबालिका समेत यो दीर्घरोगबाट पीडित छन् । तर बयस्क र बालबालिको...
फोक्सोमा समस्या देखिएपछि नगरप्रमुख आचार्यलाई सिलगुडी लगियो
झापाको मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख विमल आचार्यलाई भारतको पश्चिम बंगालस्थित सिलगुडीको किन्स हस्पिटलमा भर्ना गरिएको छ। कोरोना संक्रमण भएपछि विराटनगरको नोबेल मेडिकल अस्पतालमा उपचार गराइरहेका आचार्य डिस्चार्ज भएको केही घण्टाभित्रै किन्स हस्पिटल भर्ना भएका हुन्। नगर प्रमुख आचार्यको फोक्सोमा असर...
नेपालमा नसर्ने रोगको अवस्था झन् भयावह
नेपालमा नसर्ने रोगको अवस्था भयावह बन्दै गएको विज्ञहरुको निष्कर्ष छ। गैरआवासीय नेपाली सङ्घले आयोजना गरेको दोस्रो विश्व ज्ञान सम्मेलनका अवसरमा आयोजित ‘लाइफ एण्ड हेल्थ साइन्स’ विषयक कार्यक्रममा विज्ञहरुको छलफलबाट नेपालमा नसर्ने रोगको अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण रहेको निष्कर्ष निक्लिएको छ।...
आज विश्व मुटु दिवस। प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर २९ का दिन विश्व मुटु दिवस मनाइँदै आएको छ। ‘मन लगाऔं, मुट बचाऔं’ भन्ने नाराका साथ विश्व मुटुरोग दिवस मनाइँदै छ। बिरामीको तथ्यांक हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष मुटुरोगीको संख्या बढ्दै गएको...
चुरोट, रक्सीको सेवनले पनि बढाउँछ, कोरोना संक्रमणको जोखिम
लागुपदार्थ प्रयोग विशेषतः सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिराजन्य, कडाखाले लागुपदार्थले नेपालमा विकराल रुपमा देखा परेको छ। यसको प्रभावले विभिन्न किसिमका मानसिक समस्याहरु हुने एकातिर छ भने, यसको प्रभावले गर्दा कोरोनाको जोखिम बढाउने गरेको छ। नेपालमा लगभग प्रत्येक ३ देखि ४ जनामध्ये...
मनोरोगले आत्महत्यातिर लैजान्छ, यसरी जोगिनुस्
जानी–जानी कुनै पनि व्यक्तिले आफूलाई समाप्त गर्ने हेतुले काम गर्छ भने आत्महत्याको प्रयास भनिन्छ। जीनवप्रति वितृष्णा उत्पन्न भएर कुनै क्रियाकलापद्वारा मृत्यु हुनु आत्महत्या हो। जानी–जानी आफूलाई दुःख दिने हुँदा कहिलेकाहीँ दुर्घटनावस मृत्यु हुन पनि पुग्छ। यो पनि एक खालको...
नेपालमा कोरोनाका कारण आत्महत्या गर्ने ३० प्रतिशतले बढे
सन् २०१९ मा गरिएको एक अध्ययनका अनुसार नेपाल दक्षिण एसियाकै दोस्रो धेरै आत्महत्या गर्ने देशमा पर्छ। कोरोना भाइरस महामारीसँगै नेपालमा आत्महत्या गर्नेको २० देखि ३० प्रतिशतले बढेको पाइएको छ। कोरोना संक्रमण बढेसँगै धेरैजनामा मानसिक समस्या बढेको सूचना धेरै माध्यमबाट...
स्वस्थ मुटुका लागि नियमित गरौं यी तीन योगासन
फेरिदो जीवनशैलीले मानिसको खानपानमा अनियमितता हुने गरेको छ। जसले गर्दा मानव स्वास्थ्यमा थुप्रै खाले समस्या हुने गर्छन्। फेरिदो जीवशैलीले मानिसको मुटुमा पनि थुप्रै असर गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले केही महत्वपूर्ण योगआसन गरेर मुटुका समस्याबाट समाधान पाउन सक्छौं। योगले मुटु...
‘स्वास्थ्य भनेको रोग तथा दुर्बलताबाट मुक्त हुनु मात्र नभई सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक अवस्था तन्दुरुस्त हुनु पनि हो।’ जीवन न कसैले सोचे जस्तो हुन्छ न त रोजे जस्तो। कुन बेला कस्तो मोड र कस्तो परिस्थिति आउँछ आफैंलाई थाहा...
निद्रामा देखिने रोचक समस्याहरू मानिसहरूमा निद्रा कम लाग्ने समस्या प्रशस्त पाइन्छ। खासगरी बढ्दो उमेरका मानिसलाई यो समस्याले बढी सताउँछ। ओछ्यानमा गएपछि निदाउन धेरै समय लाग्ने, बारम्बार ब्युँझने, बिहान चाँडै निद्रा खुल्ने आदि समस्या रहन्छ। हाम्रो शरीरको स्वास्थ्यका लागि निद्रा...
तपाईंको चम्किरहेको स्क्रिन। तपाईंलाई एकटक हेरिरहेका एक दर्जन मुहार। कामको अव्यवस्थित थुप्रो, त्यसपछिको एक–एक व्यक्तिसँगको छुट्टाछुट्टै भर्चुअल बैठक अनि कार्यालयको कामको सम्पादनपछि साथीसंगी तथा परिवारका सदस्यसँग कम्प्युटरमार्फत् भेटघाट। कोभिड–१९ को फलस्वरूप लागू गरिएको बन्दाबन्दीको हालको समयमा हामी अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी...
विश्व महामारीसँगै विश्वका धेरै मानिसले यो समय तनाव र अन्योलग्रस्त दिनचर्या बिताइरहेका छन्। यो बेला मन र मष्तिस्कलाई आराम दिने खालको गतिविधि जस्तै गीतसंगीत सुन्ने, फिल्म हेर्ने, भिडियो गेम खेल्ने, साथीसंगीसँग अनलाइन गफगाफ गर्ने लगायत गर्नु स्वाभाविक हो। तर...